မြန်မာနိုင်ငံရှိ ခရစ်ယာန်ဘာသာ - ဝီကီပီးဒီးယား
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် အများစုမှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများဖြစ်သော ချင်း၊ ကရင်၊ ကချင်၊ လီဆူး၊ လားဟူ စသည်တို့ဖြစ်ကြသည်။ CIA Factbook တွင် ဖော်ပြထားချက်မှာ မြန်မာပြည်၏ လေးရာနှုန်းသော (၂ဒသမ၄သန်းခန့်) ခရစ်ယာန်လူဦးရေ ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ပရိုတက်စတင့် ၃ ရာနှုန်း နှင့် ရိုမင်ကက်သလစ် ၁ ရာနှုန်း တို့ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိကန် Anglican Communion အရ ၂၀၀၆ တွင် အသင်းဝင် ၆၂၀၀၀ ရှိပြီး၊ နှစ်ခြင်းအသင်းတော် Myanmar Baptist Convention စာရင်းအရ ပရိုကတ်စတင့်ခရစ်ယာန်အားလုံး၏ တစ်ဝက်ခန့်မှာ နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်များဖြစ်သည်။ မြန်မာနှစ်ခြင်းအဖွဲ့ချုပ်မှတ်တမ်း ၂၀၀၆ အရ အသင်းသားဦးရေ ၆သိန်းကျော် 662,834 နှင့် အသင်းတော် 3905 ရှိသည်ဟု သိရသည်။ ကချင်လူမျိုးစု (ဂျိန်ဖော၊ ရဝမ်၊ လီဆူး စသည်တို့မှာ လူဦးရေမှာ ၁ သန်း၂ သိန်း ခန့်ရှိပြီး၊ ၉၀ ရာနှုန်းမှာ ခရစ်ယန်ဖြစ်သည်ဟု မှန်းဆကြသည်။ ကရင်လူမျိုးစု (စကော၊ ပိုး၊ ကယား..) တို့ လူဦးရေမှာ၂ သန်း ၂ သိန်း ခန့်မှ တစ်ဝက်ခန့်သည်လည်းကောင်း၊ ချင်းလူမျိုးစု လူဦးရေ ၈ သိန်းကျော်မှ ၈၀ ရာနှုန်းမျှသည်လည်းကောင်း ခရစ်ယာန်ဖြစ်သည်ဟု ယူဆပါက ခရစ်ယာန်စုစုပေါင်းသည် ၂ ဒသမ ၄ သန်းမက ရှိနိုင်သည်။ စနစ်တကျ စာရင်းကောက်ယူခြင်း မရှိသေးသောကြောင့် ထိုစာရင်းများမှာ ခရစ်ယာန်လူဦးရေစာရင်းမှာ ခန့်မှန်းချေဖြစ်သည်။
၂ ရိုမင်ကက်သလစ် ခရစ်ယာန် သာသနာ
၃ ပရိုတက်စတင့် ခရစ်ယာန် သာသနာ
၄ ရှေးရိုးစွဲ ခရစ်ယာန် သာသနာ
တောင်ငူဘုရင် နတ်သျှင်နောင်ကို ဖမ်းဆီး၊ သံလျင်ကိုခေါ်သွားပြီး နောက်ပိုင်း နတ်လျှင်နောင်သည် ပထမဆုံး ထင်ရှားသူ မြန်မာ ကက်သလစ်ခရစ်ယာန် ဖြစ်လာသည်။ မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၉၇၅၊ (အေဒီ-၁၆၁၅) တွင် အင်းဝဘုရင် မဟာဓမ္မရာဇာ (ခေါ်) အနောက်ဘက်လွန်မင်းက သံလျင်ကို စုံဆင်းပြီး ဝန်းရံ တိုက်ခိုက် အောင်နိုင်ပြီး၊ နတ်သျှင်နောင်နဲ့ ဒီဘရစ်တို့ကို ကွပ်မျက်ခဲ့သည်။ ပေါ်တူဂီ စစ်သုံ့ပန်း (၄၀၀၀) ကျော်ကို ဖမ်းဆီးပြီး ချင်းတွင်းမြစ်နှင့် မူးမြစ်ကြား တဝိုက်ရှိ ရွာများတွင် မိမိတို့ ဘာသာကို လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ပြီး အခြေချ နေထိုင်ခဲ့စေကြောင်း၊ ၁၉၂၉ ခုနှစ် ထုတ် EG. Harvey ရဲ့ Outline of Burmes History ဆရာကြီး ဦးဘသန်းရဲ့ ကျောင်းသုံး မြန်မာရာဇဝင်နှင့် ၁၉၄၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလထုတ် The Voice Catholic magzine တို့တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ရိုမင်ကက်သလစ် ခရစ်ယာန် သာသနာ[ပြင်ဆင်ရန်]
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရိုမင်ကက်သလစ် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များ အမြောက်အမြား ရှိနေသည်။
ပရိုတက်စတင့် ခရစ်ယာန် သာသနာ[ပြင်ဆင်ရန်]
ရိုမင်ကက်သလစ်များသည် ၁၆ရာစု ကတည်းက မြန်မာပြည်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး၊ ပရိုတက်စတင့်များမှာ ၁၈ရာစု တွင်မှ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ပရိုတက်စတင့်ခရစ်ယာန်များမှာ မြန်မာပြည်ကို အင်္ဂလိပ်တို့ သိမ်းပိုက်သည်။ ၁၉၂၆ ပထမ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာစစ်ပွဲအပြီးတွင် များပြားစွာရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ အင်္ဂလန်အခြေပြုသော မက်သဒစ်အသင်းတော်၊ အင်္ဂလိကန်အသင်းတော်များမှာ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး မြို့ကြီးများတွင် အခြေတကျ၊ နေရာရရှိသော်လည်း အထူးသဖြင့် အမေရိကန်နှစ်ခြင်းအသင်းမှာ ဝေးလံသော နယ်မြို့၊ တောင်တန်းပြည်နယ် များတွင် သာသနာပြုရသည်။
ရှေးရိုးစွဲ ခရစ်ယာန် သာသနာ[ပြင်ဆင်ရန်]
↑ Fr. A ကိုလေး (မုံလှ)။ အင်းဝရောက် ခြေရာများ။
↑ Whitehead, Andrew. (27 August 2014) BBC News: The last Armenians of Myanmar. Bbc.co.uk. Retrieved on 2015-06-11.
↑ BBC News: The preacher refusing to give up the keys toaYangon church. Bbc.co.uk (7 October 2014). Retrieved on 2015-06-11.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြန်မာနိုင်ငံရှိ_ခရစ်ယာန်ဘာသာ&oldid=706178" မှ ရယူရန်